किन डलर गिरावटको क्रममा छ ?
सन् २०१७ को सुरुवातबाट नै अमेरिकी डलर गिरावटको क्रममा रहेको छ । जसका कारण अमेरिकाको आर्थिक वृद्धिदर पनि कमजोर रहनसक्ने देखिएको छ । गएको जनवरीयता विश्वका प्रमुख छ मुद्राहरुको तुलनामा अमेरिकी डलरमा १० प्रतिशतको गिरावट आइसकेको छ । गत साताको अन्तिम दिन शुक्रबार पनि अमेरिकी डलरमा गिरावट आएको देखिएको थियो । शुक्रबार अमेरिका र उत्तर कोरियाको बीचमा देखिएको तनावको कारण अमेरिकी डलरमा गिरावट आएको हो ।
अमरिकी डलर सन् २०१४ मा अमेरिकी अर्थतन्त्र बलियो अवस्थामा थियो । अहिले अमेरिकी डलर गएको वर्षको यसै अवधिको तुलनामा केही कमजोर अवस्थामा रहेको छ तर गत वर्ष अमेरिकाको आर्थिक विवरणहरु कमजोर रहेका थिए । त्यसो भए यस वर्ष अमेरिकी डलरमा गिरावट आउनुको कारण के हो त ?
युरोपको अर्थतन्त्रमा सुधार
केही हदसम्म युरोपको अर्थतन्त्रमा सुधार आउनु पनि अमेरिकी डलर कमजोर बन्नुको कारणको रुपमा देखिन्छ । सन् २०१४ मा अमेरिकी डलरको तुलनामा युरो कमजोर बन्न पुगेको थियो । त्यसयता युरोपले एक प्रभावकारी नीतिको साथ अगाडि बढ्यो तर अमेरिका भने यस्ता नीतिबाट टाढिन सुरु ग¥यो । अहिले युरोक्षेत्रको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण सुधार आएको पाइएको छ र युरोपियन केन्द्रीय बैंक आफ्नो आँँकलनअनुसारको नतिजा हासिल गर्ने नीति परिवर्तन गर्ने सोचमा रहेको छ । अहिले युरो तथा डलर दुवै एकैसाथ अघि बढ्नसक्ने अवस्थामा रहेका छन् । युरोक्षेत्रको महत्वपूर्ण मुलुक फ्रान्समा भएको निर्वाचनमा एम्यानुअल म्याक्रोनको जितले युरोको आत्मविश्वास बढेको देखिन्छ । युरो सुधार हुनु भनेको डलरमा गिरावट आउनु हो । अहिले युरो एक दशमलव १७ डलर प्रतिएकाइमा रहेको छ । यो नतिजा यो वर्षको सुरुवातको तुलनामा २० सेन्टले बढी हो ।
अमेरिकामा पछिल्लो समय देखिएको राजनीतिक परितवर्तनमा लगानीकर्ताहरुले देखाएको प्रतिक्रियाले पनि अमेरिकी मुद्रा केही कमजोर बन्न पुगेको हो । यद्यपि अमेरिकाको कथा युरोपको कथाजस्तो भने छैन । अमेरिकी मुद्रा अन्य मुद्राहरुको तुलनामा पनि कमजोर बन्न पुगेको छ । जसमा जापानी येन, मेक्सिकन पेसो र स्वीडिस क्रोनको तुलनामा पनि अमेरिकी डलर कमजोर बन्न पुगेको छ । यतिसम्मकि बेलायती पाउण्डको तुलनामा पनि डलर कमजोर छ । ब्रेजिक्टको निर्णयसँगै बेलायती मुद्रा ३१ वर्षयताकै कमजोर विन्दुमा पुगेको भए पनि तयसको फाइदा डलरको उठाउन नसकेको हो । त्यसयता पाउण्डमा उल्लेख्य सुधार आएको छ । मार्चमा बेलायती पाउण्ड प्रतिएकाइ एक दशमलव २२ डलरमा रहेको थियो । “यस किसिमको गिरावटले अहिले मानिसहरु अमेरिकी डलरको तुलनामा अन्य मुद्राहरुको प्रयोग गर्न थालेको देखाउँछ,” मिसौरीका विश्व प्राविधिक तथा गुणात्मक विज्ञ समीर समानाले भने । अर्को कारण डोनाल्ड ट्रम्प पनि हो ।
अमेरिकी राष्ट्रपतिमा ट्रम्प निर्वाचित भएपछि पनि सन् २०१६ को अन्तिम महिनामा डलरमा सुधार आएको देखिएको थियो । यसले करमा कटौती हुने वा संरचनामा लगानी बढाउन सक्ने सम्भावना बढाएको थियो । यो नतिजाले अमेरिकाको खर्च पनि बढाउने र डलरको माग पनि बढ्ने अनुमान गरिएको थियो । अहिले भने अमेरिकी विज्ञहरुले ट्रम्पको आर्थिक एजेण्डा लागू भएसँगै व्यापारीहरुले आफ्नो विवरण पुनः गुणना गर्न सुरु गरेको बताएका छन् । अहिले रसिया र ट्रम्पको निर्वाचन प्रचारको विषयमाम चलिरहेको अनुसन्धानले पनि ट्रम्पको प्रशासनमा समस्या देखिएको हो । साथै ट्रम्पको पछिल्लो विदेश नीतिको विषयमा पनि धेरै आशंका देखिएको छ । गत साता उत्तर कोरियासँगको तनावले पनि उनको विदेश नीतिको विषयमा आशंका उब्जिएको हो । “यदि मानिसहरु आगामी दिनमा थप राजनीतिक अनिश्चितता आउनसक्ने अनुमान गर्छन् भने त्यसैअनुसारको प्रभाव डलरमा पनि पर्छ,” सामानाले बताए ।
ब्याजदर तथा आर्थिक वृद्धिदर
डलरमा गिरावट आउनुमा ब्याजदर तथा आर्थिक वृद्धिदरको विषयमा गरिएको विभिन्न किसिमका आँकलनहरुले पनि सहयोग पु¥याएको हो । ब्याजदरमा वृद्धि हुनुको सम्बन्ध बलियो मुद्रासँग हुन्छ । उच्च ब्याजदरले विदेशी लगानी पनि भिœयाउन सहयोग पु¥याउँछ । सन् २०१५ को डिसेम्बरयता अमेरिकाले चार पटक आफ्नो ब्याजदरमा वृद्धि गरिसकेको छ । तर फेडेरल रिजर्बकी प्रमुख जनेत येल्लेनले हालसालै अमेरिकाको ब्याजदरमा आगामी दिनमा वृद्धि हुनुको साटो केही समयका लागि अमेरिकी ब्याजदरको नतिजा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कमजोर रहनसक्ने बताएकी छिन् ।
येल्लेनको चिन्ताले अमेरिकाको आर्थिक क्षेत्र थप कमजोर बन्नसक्ने देखिन्छ । पछिल्लो समय मुद्रास्फीति र तलबको वृद्धि पनि सन्तुलित अवस्थामा आउनका लागि संघर्ष गरिरहेको अवस्थामा यस्तो नतिजा सार्वजनिक भएको हो । “अहिले जे भइरहेको छ, त्यो फेडले आगामी दिनमा पनि आफ्नो मौद्रिक नीतिलाई गुमाउने अनुमानको परिणाम हो, जबकि युरोपियन केन्द्रीय बैंक भने आफ्नो मौद्रिक नीति थप बलियो बनाउँदै अघि बढिरहेको छ,” हावार्ड युनिभर्सिटीका प्रोफेसर जेफ्री फ्राइडेन बताउँछन्, “यद्यपि अमेरिकाको आर्थिक वृद्धिदर आशा गरिएअनुसारको तीव्र हुँदैन भन्नु भने छिटो हुन्छ ।
अहिले देखिएको अनिश्चितता कत्तिको गम्भीर छ ?
अमेरिकी डलरले आगामी दिनमा कस्तो प्रदर्शन गर्छ भन्ने कुराको अनुमान लगाउन कठिन छ । अहिलेको अवस्थामा अमेरिकी डलर न निकै बलियो हुने न अत्यधिक गिरावटमा पर्ने हावार्ड केनेडी स्कुलका प्रोफेसर जेफ्री फ्यांकेलको ठम्याइ छ । अर्थविद् रिचार्ड मार्टसनका अनुसार पछिल्लो समय अमेरिकाको सेयर बजारमा महत्वपूर्ण सुधार आइरहेको कारण लामो समयसम्म अमेरिकी डलरमा गिरावट आउने सम्भावना छैन । “यो अमेरिका र अमेरिकी सरकारको आत्मविश्वासको कुरा होइन किनकि यसले पनि बजारमा त्यत्तिकै असर पार्छ,” उनले भने ।
यद्यपि फ्राइडेन भने अमेरिकी मुद्रामा स्वतन्त्ररुपमा गिरावटमा परिरहने खतरा मौलाएकोमा विश्वास गर्छन् । पछिल्लो समय अमेरिकी प्रशासन तथा फेडेरल रिजर्बको कदमहरुले भने यसको संकेत गरेको उनको भनाइ छ । आगामी फेब्रुअरी महिनामा फेड प्रमुख येल्लेनको पदावधि सकिँदैन, त्यसपछि उनको स्थानमा को आउँछ ? भन्ने कुरा निकै महत्वपूर्ण हुने उनको अनुमान छ । “यदि अमेरिकी डलर अहिलेको गतिमा लगातार गिरावट हुँदै गइरहेको अवस्थामा यो नकारात्मक किसिमको गिरावट मात्र नभई यसले अमेरिकाको अर्थतन्त्र तथा अमेरिकी सरकारको आत्मविश्वास पनि कमजोर बनाउँछ,” फ्राइडेनले बताए, “यो अमेरिकाका लागि निकै नराम्रो हुनसक्छ र यसले अमेरिकी सरकारलाई केही गर्नैपर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नसक्छ ।
के यो अमेरिकाको समग्र नराम्रो पक्ष हो ?
फ्रांकेल आफूले सामान्यतयाः अमेरिकी डलर अन्य मुद्राहरुको तुलनामा गिरावट अउनसक्ने अवस्थाको रुपमा बढ्दो राष्ट्रिय ऋण तथा अनय विषयहरुलाई आधार मान्ने गरेको बताए । सन् २००८ मा आफ्नो अनुमान विपरीतको नतिजा देखिएपछि भने आफूले यस्तो अनुमान गर्न छाडेको बताए । उनले अझै पनि केही पक्षबाट हेर्दा डलर विश्वको एक नम्बरको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा रहेको बताए । यस विषयमा ट्रम्प पनि त्यति धेरै चिन्तित भने देखिँदैनन् । उनले एक अन्तर्वार्तामा आफूले डलर अत्यधिक बलियो रहेको नचाहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । उनले वास्तवमा अमेरिकी डलर बलियो रहेको अवस्थामा धेरै किसिमका नराम्रो समाचारहरुको सामना गर्नुपर्ने बताए ।
ग्राहक र उत्पादकको व्यापारमा कमी
आधिकारिक राष्ट्रपतिको पदमा रहेका ट्रम्पले दिएको यो अभिव्यक्ति अन्य राष्ट्रप्रमुखको तुलनामा भिन्न किसिमको छ । कमजोर डलरको अर्थ मानिसको खर्च गर्ने क्षमता पनि कमजोर हुन्छ । विदेशबाट आयात हुने सामग्रीहरुको व्यापारमा गिरावट आउनसक्ने देखिएको हो । यो सत्य अमेरिकी उत्पादकहरुको लागि पनि लागू हुन्छ । यदि उनीहरु विदेशी ग्राहकहरुमा भर पर्दै आएका छन् भने अमेरिकी डलर कमजोर रहनु पनि एक समस्या हुन्छ ।
कमजोर डलरले आगामी दिनमा अमेरिकीहरुलाई थप कमजोर बनाउने फ्राइडेनको भनाइ छ । यो कल्पना होइन, यो वास्तविक हो । यद्यपि पछिल्लो समय व्यावसायिक पृष्ठभूमिका ट्रम्प अमेरिकी डलर कमजोर बनाई अमेरिकाको निर्यात व्यापार बढाउन चाहन्छन् । जसको कारण उनी कमजोर अमेरिकी डलर भएकोमा चिन्तित छैनन् । (बीबीसीबाट)